[Fikirka Dadweynaha]: Waa Maxay Jeegaan, Beelaha Kuheshiiyey.
Saturday March 24, 2018 - 13:38:40 in Arrimaha Bulshada
Haddaba aan iswaydiinno maxay labada beelood magaca ee jeegaanta isu xulufaystay maxay isu garabsadeen yeyse garabka ku riixayaan?
Bismillaahi Arramanirraxeem. Dhammaan ummadda reer Somaliland iyo warbaahintooda waxaanu idin leenahay Asalaamu calaykum wa raxma tullaah wa barakaatuh
Warsaxaafadeed ka soo baxay odayaasha musdambeedka jaaliyadaha reer Somaliland ee deggen, carriga ingiriiska kuna tilmaaman waa maxay jeegaan,beelaha ku heshiiyey.
Annaga oo u damqanayna dalkayaga kana gubannayna in jiritaankiisa dhibi la soo deristo iyo tafaraaruq aan la mahadin
Waxay nagu kalliftay in aanu tilmaanno dhibatada ay keeni karto beelaha Somaliland ee dalka wada leh oo dhabarka isu jeediya,taas oo sida aynu wada ognahay waxaa hadalhaynteedu war baahinta ku badatay wax loogu magac daray jeegaan oo la soo celceliyey
dumarkiina ka ka faaloodeen,tunkana u saareen madaxdhaqmeedka labada beelood ee gardarrada ku heshiiyey
Haddaba aan iswaydiinno maxay labada beelood magaca ee jeegaanta isu xulufaystay maxay isu garabsadeen yeyse garabka ku riixayaan? su,aashaas jawaabteedu laba beelood oo ka leexaday jidkii toosna oo qardajeex isu doontay
Sua,aal kale maxay beelaha kale ee ay isku deeganka yihiin u jidhdiidayaan? Tanna jawaabteedu waa xin iyo xiqdi ilaahay xaarantinnimeeyey.
Su,aal kale magaca jeegaantu ma sii jiraysa? Tanna jawaabteedu waa maya oo waxa laga dhaxli karaa burbur dalku galo waxaynu tusaale u qaadan donna keligii taliskii siyaad barre oo dhawr iyo labaatan sannadood ka xulufaystay bulshada reer Somaliland beelaha deggenaa gumaadkana kula kacay xaqoodiina u wareejiyey koonfur ee ilaa haatan la gubanaysa,shacabkii reer Somaliland waa kuwii iska rogay iskana dulqaaday dhibtii uu ku hayey.
Somalilandna waxaanu uga baqanayna taas oo kale haddii laga hortegin( horaa loo yidhi belaayo madax la qabto ayey leeday ee dabo la qabto ma laha )
Maxa la gudboon beelaha garabka ku riixaya beelaha walahood ah dalkuna ka dhexeeyo in ay ka raalligeliyaan una sheegaan una dhaartaan in ay ka baxeen halhayska qallafsan ee ku caanbaxay(jeegaan ) ama (qardajeex) in madaxdhaqameedka reer Somaliland kulan yeeshaan arrintaas laysugu laab xaadhaayo waayo dalka haddii loo danaynaayo sidan ayuu khayrku ku jiraa beelna kuma habboona in dalku gacantooda ku burburo u fiirso qabiilka Mareexaan ee wada madaxda ahaa burburka Somaliya iyaga ayaa ku suntan.
Qodobban hoose u fiirso.
In la laga gudbo lana soo qaadin hadal haynteeda odhaah bulshada kala fagaysay ee (jeegaan)
In ay golaha wakiilladu qorshe ka lahaadaan wax kasta oo beelaha reer Somaliland xanaf ku reebaya sida jeegaanta.
In ay dawladdu qorshayso kulan ay madaxa dhaqameedaka ku midaynayso.
In aan dumarka xadhigga lagula degdegin haddii laga tegiwaayo in la xidho kuwa fusuqa lagu eedeeyo.
In buugga wasiirku qoray guribarwaaqo dumarka ku aflagaaddeeyey la gubo.
In khyraadka dalka ku jira laga faa,iidaysto sida beeraha oo cashuur dhaaf loo sameeyo mulkiilaha beerta lehna dawladdu ka caawiso qalabka falidda beeraha.
In la badiyo baryada Allaah.
wax aanad keliga lahayn oo lagula leeyahay haddii ku tagri fasho waa kugu xaaraan sida (maal -xoolo) iyo (mood-Lacag) (quutaldaruuri gasiin ama cunto sida biyaha iyo wax kasta oo la quuto)
dulmiga iyo xaqu meel wa wada meel ma wada fadhiistaan xaqa ayaa guusha leh marwalba.
ha ilaawin in aad dhimanayso u diyaar noqo malaa,igtu su,aalaha ay ku waydiin doonaan kuma wadin doonaan qabiilkaaga iyo qof aad jeclayd waxaa kaa raaci aduunka camalkaagi intii aad adduunka joogtay
ilaahy ayaa mahad leh innaga dhigay mulimiinta wanaagsan